Fahazavana jiro, Jiro fantsom-pahazavana, Jiro mandeha amin'ny jiro - Lightman
Maninona no mifidy Lightman
Fahazavana jiro lampihazo LED
Jiro tontonana jiro miverina amin'ny hazavana
UL & DLC LED Panel Fahazavana
Jiro tontonana LED maivana
CCT mora azo jiro LED hazavana
Jiro panel an'ny rano
Light Light ho an'ny marika & Sky LED
Multilunctional LED Panel Fahazavana
Fahazavana LED tontonana ambany
Downlight panel eo amin'ny kianja Square
Jiro lakolosim-pahazavana boribory LED
Fahazavana jiro tontolon'ny jiro LED
Dingana Fantsona LED Loko Double
Fahazavana lehibe nitarika ny tontolon'ny panel
Jiro fantsarin'ny jiro LED
Nampiato Light Linear Light
Ny fantsom-pifandraisana LED Linear jiro
Jiro Sterilizer UVC
Jiro Sterilizer UVC-A
Jiro UV--Sterilizer UVC
Jiro UV-C Sterilizer
Aforeto UVC Sterilizer Wand
Wand Sterilizer UVC tànana
Ebons UVC UV
Fitaovana UV Sterilizer finday
Boaty UV Sterilizer UVC
Jiro UV Sterilizer UV induction
Jiro UV Sterilizer UV
Birao sy efitrano fivoriana
Sekoly sy fampianarana amin'ny oniversite
Efitrano fitsaboana sy efitrano fidiovana
Toerana sy toerana fanatanjahantena
Fiaran-dalamby sy fiaran-dalamby
Trano & hafa
Fampiharana fampiharana anti-rano
Fampiharana andiany tsy misy fotony
RGB & RGBW & RGBWW fampiharana
Fampiharana LED Panel Downlight Series
Jiro tontonana lehibe lehibe
Fampiharana jiro namboarina manokana
Torolàlana fametrahana vokatra
Mpanamboatra traikefa miaraka amin'ny traikefa an-taonany nandritra ny jiro panel nitarika. Mpanamboatra matanjaka izay manana tsipika vokatra feno indrindra dia manarona ny ankamaroan'ny karazan-jiro mitarika. Mpanamboatra matihanina manana fahaiza-manao hanome vahaolana hazavana mitarika feno. Manamboatra fahafaham-po mandrakizay ho an'ny mpanjifa mandrakizay ny mpamorona iray azo itokisana.
RANOMASINA & FAMPISORANA
Ny jiro lightman dia nitazona jiro malefaka sy ny endrika maoderina vita amin'ny luminaire mavitrika dia mamorona atrikasa miasa tsara ary raha jerena ny fahombiazan'ny angovo, nametra ny fenitra ny Light Luminaires. Ny vahaolana jiro lightman dia ahafahan'ny asa vita mora kokoa, mampitombo ny fahasalamana ao amin'ny birao ary manapaka ny fiasana be loatra.
Fahazavana jiro LED an'ny rano IP65
Ny jiro panel IP65 LED dia natao ho an'ireo rindran-tsary ao anaty tontolo feno vovoka na mando na mando izay tsy azo atao miaraka amin'ireo takelaka LED mahazatra. Izy io dia mety amin'ny toerana mando, toy ny efitrano fandidiana, vata fampangatsiahana ary lakozia, fanasana fanasana sns sns Tsara koa arakaraka ny takian'ny efitrano madio.
RGBWW LED Panel Fahazavana
Izy io dia afaka manitsy ny loko RGB ary manova ny hafanana loko avy amin'ny fotsy mafana ka mangatsiaka fotsy miaraka amin'ny fiasa milamina. Mety hahatratra 25-30 metatra ny halaviran-tena tsy misy fifehezana lavitra an-tserasera. Ny fifehezana finday sy ny fampiharana finday azo ampiasaina. Ampiasaina betsaka amin'ny teatra, KTV, bar, rink skating, hotely, akanin-jaza, trano fisakafoanana, toerana fialamboly.
Jiro fantsona hazavana
Karazan-doko isan-karazany ho an'ny safidy handravaka ny sisiny sy fehin-tendrony Fahatsinontsana seamless ho an'ny endrika endrika volavola volafotsy, fotsy na mainty ho an'ny safidy azo atao, halavany 2400mm
Jiro LED boribory hazavana
Hanambatra ireo hazavana mamirapiratra avo miaraka amin'ny fanafarana Mitsubishi PMMA LGP ho an'ny endrika manjavozavo, tsotra seamless ary ny fametrahana mora ho an'ny fandefasana fampiharana.
Ny fampitomboana ny fiasa iray mankany LED dia afaka mamonjy saika $ 7 isam-bolana.
Ny LED dia mampiasa angovo 85% mahery noho ny halogen ary 18% latsaky ny CFL.
Mamirapiratra eo noho eo
Tonga hatrany amin'ny hazavana feno ny hazavana LED, tsy misy flicker na manafana ny hafanana.
Fahaiza-manao manome vahaolana feno jiro mitarika.
AC100 ~ 277V 50W Miato amin'ny takelaka vita amin'ny takelaka vita amin'ny jiro 2 × 2
Fahazavana anatiny 60W Recessed LED Flat Panel Light 120 × 30
5 taona Garantiana 54W Square LED Slim Ceiling Panel Light 60x60cm
Momba an'i Shenzhen Lightman
Shenzhen Lightman Optoelectronics Co., Ltd dia orinasa avo lenta amin'ny sehatry ny orinasam-pamokarana avo lenta miaraka amin'ny famolavolana fahazavana LED manamboatra ary manandrana. Tamin'ny 2012, nanangana ny orinasa OEM "LED Panel Light Co, Ltd i Lightman." izay manome baiko OEM ho an'ny orinasam-pifandraisana anatiny sy iraisam-pirenena. Ny orinasa dia manampahaizana momba ny haitao teknolojia fanaovan-jiro LED ary manolotra andalana feno vahaolana vahaolana amin'ny jiro LED.
Ny fananganana trano indostrialy, ny zaridaina faha-3, ny distrikan'i Guangming, ny tanàna Shenzhen, faritanin'i Guangdong, 518106, PRChina
Ampidiro ny adiresy mailakao hahazoana ny hetsika vaovao vaovao momba ny Metal.